Xassan Daahir Aweys ‘’Al-shabaab Dowlad diid Ma’aha Ee Dowlad Islaami ah ayeey Doonayaan" | Awdalmedia.com
Xassan Daahir Aweys ‘’Al-shabaab Dowlad diid Ma’aha Ee Dowlad Islaami ah ayeey Doonayaan"
Wadaadka mudadda dheer xabsi guriga ku ah magaalada Muqdisho Sheekh Xassan Daahir Aweys kana mid ahaa saraakiishii sar sare ee Ururka Al-shabaab kaddib markii uu bur buray Ururkii uu madaxda ka ahaa Xisbul Islaam ayaa fariin u diray dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaaho Farmaajo.
Xassan Daahir oo fariintiisa ku soo hadal qaaday taageerada ballaaran oo ay shacabka u hayaan madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in arrintaa ay ku timid sababo badan oo is biirsaday.
‘’ Taageerada ay shacabka kuu muujiyeen dhowr arrimood ayaa keentay sida aan is leeyahay, waa marka koowaad shacabku wey dhibtoodeen sidaa daraadeed isbadalka ayeey rabeen iyaga oo aan eegin waxa ku hareereysan isbedalkaa dhacaya, tan kale mudadii Lixda bilood ah ee aad ra’iisal wasaaraha aheydna waxbey kaa Ar-arkeen, marka arrimahaa oo isbiirsaday ayaa is leeyahay waxaad ku heshay taageerada dadweyne ayuu yiri’’ Xassan Daahir Aweys.
Madaxweynaha ayuu kula taliyay in uu siweyn uga fiirsado shaqsiyaadka la shaqeynaya, isaga oo sheegay in ay jiraan qaar doonaya oo kaliya in ay dhaqaale sameeyaan.
Dhinaca kale mar uu soo hadal qaaday aragtida ay dowladda ka qabto Al-shabaab ayuu sheegay in uusan ku raacsaneyn dowladda habka ay u wajaheyso Al-shabaab oo uu ku tilmaamay in aysan dowladdiid aheyn.
‘’Anniga waan ku khilaafsannahay qaabka aad u wajaheyso Al-shabaab oo aad leedahay waa dowladdiid, waa War uu cadawga meeriyay ee War Islaam ma’aha, War Soomaali ma’aha, War siyaasi ma’aham War Caqliyanna ma’aha, Al-shabaab dowladdiid ma’aha laakiin waxaa ay doonayaan dowlad Islaami ah, waan qirsannahay in ay qaladaad sameynayaan marmarka qaar, laakiin sida aad ogtahay marka uu dagaal jiro oo koox ay hubka qaadato qalad waa imanayaa ayuu yiri’’ Xassan Daahir.
Xassan Daahir Aweys oo ah shaqsi siweyn loo garanayo islamarkaana muddo dheer ka soo mid ahaa Ururada Islaamiga ah ayaa hadda Xabsi Guri ku ah magaalada Muqdisho oo muddo dheerba uu ku xirran yahay.
Sheekh Mukhtaar Rooboow oo ka mid ah raggii ay soo wada shaqeeyeen Xassan Daahir Aweys ayaa hadda isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya.